Manchester United ayaa ku dhawaaqday seddex ciyaaryahan
Kooxda Man United ayaa xaqiijisay in 3 xiddig oo muhiim ah laga reebay kulankii FA Cup ee ay xalay la ciyaarayeen kooxda Man United laakiin xiddig kale ayaa dhaawac looga saaray kooxda.
Ole Gunnar Solskjaer waxaa ka maqan Paul Pogba, Luke Shaw iyo Victor Lindelof, oo seddexdoodaba seegay kulankii 1-0 ay kaga badiyeen Watford.
Manchester United ayaa markii dambe u adeegsatay Harry Maguire, Anthony Martial iyo Marcus Rashford inay ku guuleystaan ​​guusha, laakiin kabtanka Maguire Eric Bailly ayaa ku qasbay inuu isbedelo ka dib markii ay isku dhaceen goolhaye Henderson.
Lindelof, oo dhibaato dhabarka ah uu soo maray muddo sanad ah, Luke Shaw, oo ku dhowaad bil ka maqnaa xilli ciyaareedkan, iyo Paul, oo seegay seddex kulan dhaawac canqowga ah bishii November, ayaa dib ugu soo laabtay kooxda United. xaqiijiyey inay dhaawacan yihiin, laakiin lama filayo inay heshiis weyn noqoto.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay dhamaadkii ciyaartii shalay ee Watford Eric Bailly oo casaan loo taagay markii ay isku dheceen goolhayihiisa wuxuuna yidhi: “Markaan runta ka hadlo, waxba ma odhan karo haatan laakiin waxaan u malaynayaa inuu leeyahay hungur xanuun. “Waxaan rajeynayaa inuu noqon doono dhaawac muruqa ah laakiin waan hubin doonaa berri (maanta) mana fileyno inuu muddo dheer maqnaan doono.”
Eric Bailly ayaa isla habeenkaasi bartiisa Twitter-ka ku shaaciyay in uu soo gaadhay miyir beel isla markaana uu ku sugan yahay xaalad xasiloon wuxuuna ku yidhi ereyo kooban: “Caadi ayaan ahay, waxaay ahayd uun jahwareer.”
Qarax ay ku dhaawacmeen 4
Wafdigii Kenya ee dib ugu soo laabtay Muqdisho